musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Coronavirus yakaporeswa munyika sere
Airlines • Belgium Kupwanya Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Cambodia Kuputsa Nhau • China Kuputsa Nhau • dzidzo • Finland Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • India Kupwanya Nhau • Nhau Dzakanaka • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • Nepal Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Resorts • chengetedzo • Spain Kuputsa Nhau • Sri Lanka Kuputsa Nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Ndeapi mafambiro ekuenda akachengeteka kubva kuCoronavirus?
Hutachiona hwanga hwaisa chiuno chinoonekwa paindasitiri yekufamba, kunyangwe hazvo nyika zhinji pasi pano dzisina kana hutachiona. Sangano reWorld Health harina kubvira rapa zano rekuvhara miganhu uye kugadzira kutya pakati pevaya vanoda kuongorora nyika.
Masayendisiti ari kushanda kutenderera nguva kuti awane mushonga uye mushonga we COVID-19, inozivikanwawo se coronavirus. Iine 68,386 kesi dze COVID-19 muChina chete uye 1894 kufa, inhau dzakanaka kwete chete kune yekufambisa neyekushanya indasitiri iyo nyika zvisere dzakakwanisa kubvisa nekurapa avo vairwara nehutachiona.
Nhau dzakanaka ndedzekuti, China yakazivisa kufa kwehutachiona zana nemakumi matatu nematatu uye kunyudza muzviitiko zvitsva nezuro apo mukuru weWorld Health Organisation akarumbidza zvakaitwa nenyika kuti dzivirire chirwere ichi, vachiti "vatenga nyika nguva" uye kuti mamwe marudzi anofanira zvizhinji zvacho.
France, zvakadaro, yakashuma kufa kwekutanga kweEurope kubva kuhutachiona hutsva, mushanyi wechiChinese anobva mudunhu reHubei, uko chirwere chakabuda muna Zvita. United States yaigadzirira kubhururutsa vatakuri vekuAmerica kuenda kumba avo vakaiswa mukati mechikepe chengarava kubva kumahombekombe eJapan.
India, Russia, Spain, Cambodia, Nepal, Belgium, Sri Lanka, Finland vese vaive vakanyoreswa maCoronavirus uye vakakwanisa kubvisa hutachiona munyika idzodzo.
Zvinotora kuranga uye kuzvipira uye dzimwe nguva zvipatara zvepamusoro kuita izvi.
Tourism ibhizimusi hombe mune dzimwe nyika dzakakanganiswa. Kubvisa uye kusarura vashanyi kubva kune dzimwe nyika kunogona kunge kusiri iko kiyi yekukunda kutyisidzira kweutachiona.
Cambodia nezuro chaiye yakati waKugamuchira vashanyi kubva kuChina neruoko rwakashamas uye akakurudzira mahotera kuti ape chaiwo hushamwari mitengo kune vashanyi veChinese.
Nepal iri kuenda kunze kwese kuri kuuya ITB yekushambadzira indasitiri yekutengesa show muBerlin. Nyika haisi kumira kupemberera gore ravo reNepal 2020, rinokosha gore rekusimudzira kushanya. Nepal Tourism Board pamwe neNepal Embassy muBerlin vakatonyoresa vangangoita mazana maviri vatengi vepamusoro uye shamwari dzeNepal kutora chikamu mu Nepal Husiku yakarongedzwa neTN munaKurume 5 kuLagenhaus muBerlin, Germany. Vaverengi ve eTurboNews vanokokwa kuzopemberera kushanya uye nzvimbo yeCoronafree.
Bhalisa kuNepal Night muBerlin kuITB
KuSri Lanka, kubviswa kweCoronavirus inhau dzakanaka zvakare sezvo nyika ichiri kupora kubva muchiitiko chekutyisa muna Kubvumbi 2019, chakauraya vanopfuura makumi mana vashanyi. Shiri Ranga parizvino iri kupa mavhiza evashanyi emahara. Sri Lanka rinotungamira boka rehotera Jetwing Hotera vakangotambira muenzi wavo wekutanga kune wavo achangovhurwa Jetwing Kandy Gallery Resort.
Vegan-Kudya-kuve-kunoshumirwa-ku-Jetwing-Ayurveda-Pavilions, Sri Lanka
Zvinosuruvarisa, idzi dzinogona kungova nhau dzakanaka kwenguva shoma uye shoma sezvo Narasimhan, CEO weSwitzerland kambani yemishonga Novartis, akaudza CNBC: "Chokwadi ndechekuti, zvinotora gore mukutarisira kwangu kuwana mushonga mutsva weizvi , isu tinofanirwa kushandisa chaizvo epidemiological kutonga kuti tinyatso tora mamiriro aya munzvimbo iri nani.
Parizvino, hutachiona huri kushanda munyika dzinotevera dzine huwandu hwezviitiko zvakanyorwa. Huwandu chaihwo hwevanhu vanorwara hunogona kunge hwakwira nekuti zvimwe zviitiko zvehutachiona zvakaita kunge dzihwa uye zvingave zvisingazivikanwe kune vane hutachiona, kunyangwe zvichitapukira.
Chamhembe Korea (28)
Safertourism iri kuronga chiitiko chemangwanani-chekupedzisira padivi peiyo ITB yekutengesa show muBerlin, Germany. Rumwe ruzivo rwekuti ungaita sei: http://safertourism.com/coronavirus/
Dzvanya kuti upinde muhurukuro
Kuchengetedzwa iri kupawo yakavanzika mawebhusaiti naDr Peter Tarlow, nyanzvi inozivikanwa mukufamba uye kuchengetedzwa kwekushanya nekuchengetedza. Dr. Tarlow vanodzidzisawo pachikoro chekurapa uye vanodzidziswa paCoronavirus. Ruzivo rwakawanda nezvekuti kambani kana kwainoenda ingapinda sei kutaurirana enda https://safertourism.com/qa/